Mid ka mid ah halyeeyada Chelsea oo ugu baaqay Hazard inuu go’aamiyo mustaqbalkiisa garoonka Stamford Bridge – Gool FM
“Waan ka xumahay Van Dijk… Messi waa inuu kaa horreeyaa” – Sadio Mané
Zlatan Ibrahimovic oo si weyn u amaanay xiddigaha Ronaldo iyo Messi, isagoo dhinaca kale sheegay….
Inter oo wali cadaadineysa Juventus, kaddib markii ay guul dirqi ah ka gaartay kooxda Sassuolo… +SAWIRRO
Klopp oo jawaab adag ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray macalinka Man United ee Ole Gunnar Solskjær
Mid ka mid ah halyeeyada Chelsea oo ugu baaqay Hazard inuu go’aamiyo mustaqbalkiisa garoonka Stamford Bridge
Dajiye January 24, 2019
(Chelsea) 24 Jan 2019. Halyayga kooxda Chelsea ee Michael Ballack ayaa ugu baaqay Eden Hazard inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa si uu kaga tago garoonka Stamford Bridge ama uu u sii joogo.
42 jirkan ka mid ah xidigaha soo maray kooxda Chelsea ayaa tilmaamay in ay haboon tahay in laacibka reer Belgiam uu kala cadeeyo mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, isla markaana uu go’aamiyo hadii uu doonayo inuu sii joogo ama uu baxo dhamaadka xili ciyaareedkan.
Wargeyska “AS” ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay dhawaantan laacibkii hore kooxda Chelsea ee Michael Ballack waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hazard waxaa laga doonayaa inuu go’aamiyo hadii uu doonayo kooxda Chelsea ama hadii kale, wuxuu muhiim u yahay kooxda iyo sidoo kale horyaalka Premier League”.
“Haatan waa inuu go’aamiyaa hadii uu xiiseenayo inuu u dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ugu fiican aduunka sida uu horey u sheegay”.
“Eden Hazard waa mid ka mid ah xidigaha xidigaha ugu fiican aduunka, bixitaankiisana shaki la’aan waxay dharbaaxa xoogan ku noqon doontaa kooxd Chelsea, laakiin hadii uu xiiseenayo in uu sidaas sameeyo suuragal ma noqoneyso in laga hor istaago”.
“Hazard waa inuu u sheegaa maamulka Chelsea waxa uu doonayo inuu sameeyo, sidoo kale maamulka iyaguna waa inay fahmaan rabitaankiisa, balse jawiga haatan waa midaan u fiicneyn kooxda”.
Solari oo soo saaray liiska xidigaha Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka caawa ee Girona
RASMI: Laacibkii Chelsea John Obi Mikel oo dib ugu soo laabtay Horyaalka Ingiriiska...(Lambarkee loo Xiray)+SAWIRRO